लघुकथा | युनिभर्सल खबर
Home कला लघुकथा
परपुरुषहरुसँग फेसबुकमा जिस्किने गर्छु
Posted By: युनिभर्सल खबरon: February 03, 2018 In: कला, लघुकथा
पहिलो पटक जब फेसबुकमा उसको म्यासेज आयो म झस्किएँ । मुटुको गति थामिए जस्तै भयो । श्रीमान घरमा हुनुन्थेनन् । फेरी पनि मैले कुनै गलत गर्दैछु झैं लाग्यो । अनलाईनमा आएको एउटा म्यासेजलाई हेर्न पनि...	Read more
यस्ती स्वास्नी कसैको पनि नहोस् !
Posted By: युनिभर्सल खबरon: November 27, 2017 In: कला, लघुकथा
गाँउमा वर्षभरी खेती गर्दा पनि खान पुग्दैन थियो । गाँउका सबै केटाहरु बिदेश जान थाले । त्यही भएर आमाले त पनि अब बिदेश जा भन्नु भयो । बुवा सानैमा वितेकाले आमाले धेरै दुखः गरेर अर्काको घरमा बनि...	Read more
गर्भबाट छोरीको पुकार !-आमा मलाई जन्मन दिनोस् ।
Posted By: युनिभर्सल खबरon: October 06, 2017 In: कला, लघुकथा
‘कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता नभवति’ सन्तान कुपुत्र भए पनि माता कुमाता हुन सक्दिनन् भन्छ शास्त्र । गर्भमा रहेकी भ्रूण (पेटभित्रकी बालिका) ले किन मेरो भ्रूणहत्या गर्न खोजेको आमा मलाई जन्मन...	Read more
के सबै राम्री केटीहरु घमण्डी हुन्छन? – राम्री तर घमण्डी युवतीको कथा
Posted By: युनिभर्सल खबरon: August 13, 2017 In: कला, लघुकथा
एकादेशमा अचम्मै राम्री एउटी यूवती थिईन। गाउँ शहरमा उनको रुप र जीउडालको राम्रै प्रशंसा हुन्थ्यो। जवानहरु उनलाई पाउन भुतुक्कै हुन्थ्ये । तर यूवती भने तिनीहरुलाई मान्छे नैं गन्दैनथिन। उनलाई आफ्...	Read more
Posted By: युनिभर्सल खबरon: July 16, 2017 In: कला, लघुकथा
मेरो अफिस अलि टाढा भएको र आफ्नै साधन पनि नभएकाले म सधैजसो सार्वजनिक गाडीमा नै अफिस जान्थे । गाडी प्रायः भीड नै हुन्थ्यो तर पनि त्यो दिन अलि बढी नै भिड थियो । त्यसैले गर्दा म बस्नको सिट खोज्द...	Read more
एकतर्फी प्रेमको कथा
Posted By: युनिभर्सल खबरon: July 11, 2017 In: कला, लघुकथा
एकतर्फी प्रेम त्यो हो, जसमा एउटाले माया गर्छ तर अर्कोले त्यो प्रेम अस्वीकार गर्छ । मलाई पनि पहिले त्यस्तै लाग्थ्यो । आजभोलि बुझ्दैछु, एकतर्फी प्रेममा अर्कोले पनि माया त गरेकै हुन्छ तर अर्काक...	Read more
पोइटिङ्ग्रे – लघु कथा
Posted By: युनिभर्सल खबरon: June 05, 2017 In: कला, लघुकथा
शिक्षा एवं पेसामा समान स्तर भएकाले म र मेरी श्रीमती एक–अर्कालाई कहिले ‘तपाईं’ त कहिले ‘तिमी’ भनेर सम्बोधन गथ्र्यौं । हामी खाना पकाउने, कपडा धुने, घर सफा गर्ने तथा भाँडा माझ्ने काम सँगै गथ्र्...	Read more
Posted By: युनिभर्सल खबरon: March 08, 2017 In: कला, लघुकथा
सफा अनुहार, तिलचामल कपाल, शरीरमा उस्तै मिलेको पहिरन। पहिला त लाग्यो, आफू चढेको हवाइजहाजको पाइलट यीनै हुन्। पाइलट भन्ने बित्तिकै सम्पूर्ण रुपमा योग्य एक व्यक्तिको झल्को आउँछ। सन् २००८ मा पह...	Read more
फेसबुक – लघुकथा
Posted By: युनिभर्सल खबरon: February 11, 2017 In: कला, लघुकथा
बिउँझिदा ‘म त हारेको मान्छे…’ गीत बजिरहेको थियो । मन अमिलो भयो अनायासै । अतीत रिल बनेर आँखाअगाडि घुमे, अनि चस्स मुटुमा घोचे । ‘जिन्दगी हार नै त हो नि, जित त क्षणिक हो, ’ अमिलो मनलाई सम...	Read more